भाग्यमानी छोरा - भाग ४ [Read Previous Episode] क्रमश…
मेरो बाह्र कक्षाको परीक्षा सकिइसकेको थियो । राम्रै डिभिजनमा पास हुने निश्चित थियो । बहिनी रुबीनाले पनि राम्रैसँग परीक्षा दिएकी थिई । काम बिशेषले बुबा-आमा गाँउको घर ईलाममा जानुपर्ने भयो । त्यहाँको जायजेथा बिक्रि गर्ने लगायत केहि आफन्तको विवाहको कार्यक्रममा भाग लिने उद्देश्य उहाँहरुको थियो । जान त मलाई पनि मन थियो तर पसल हेर्नुपर्ने बाध्यताले बुबाले मलाई बिहानको सबै काम सिकाएर छोड्नुभएको थियो । मेरो खानाको लागि भनेर रुबीनालाई पनि नलैजाने निर्णय लिईएको थियो । बुबा-आमा इलाम जानुभएको पहिलो दिन त बिहानै मैले आमालाई धित मर्नेगरी चिकेको थिएँ । राती खाना खाएर रुबीना किचनमा भाँडा सफा गर्नतिर लागि । म टि.भी.मा रेस्लिङ्ग हेर्न लागें ।
रातीको नौ बज्नै थालिसकेको थियो । मैले केबुलमा कुनै फिल्म दिईरहेको छ कि भनेर च्यानल चेञ्ज गरें । संयोगले आजपनि ब्लु-फिल्म दिईरहेको रहेछ । बेलुका भएपछी आमाको शरिरसँग खेल्ने र चिक्ने बानी परेको म तलतल लागिसकेको थियो । मैले टि.भी. को साउण्ड सानो बनाएँ र ब्लु-फिल्म हेर्न थालें । ब्लु-फिल्म हेर्दाहेर्दै बहिनी किचनमा छे भन्ने बिर्सेर मैले कट्टुबाट लाँडो निकालेर खेलाउँदै फिल्म हेरिरेहको थिएँ । कुन बेला रुबीनाले किचनमा काम सकेर हातमा पानीको ग्लास समातेर बैठक कोठाको छेउमा आईछे मलाई थाहा भएन । आफूभन्दा एकै बर्षले कान्छी रुबीना मसँग मजाले खुलेर कुरा गर्थी । तर, आज ऊ मलाई केही नभनीकन पछाडीबाट ब्लु-फिल्म हेरिरहेकी थिई । फिल्ममा उत्कर्षको समय आएपछी केटोले केटीको मुखमा मजाले फुसी झार्यो र त्यही बेलामा पछाडीबाट ग्लास भुईंमा झरेको आवाज आयो । दुई-चार पटक लाँडो अरु हल्लाउन पाएको भए मेरो लाँडोले पनि फुसी ओकल्ने निश्चित थियो । म तन्द्राबाट भंग भएर पछाडी फर्किएँ ।
रुबीना अवाक भएर ठिङ्ग उभिएकी थिई । त्यो हतासमा मैले लाँडोलाई कट्टुमा छिराउन बिर्सेर रुबीनालाई हेरेको हेरेई भएँ । निकैबेरसम्म रुबीनाको आँखा र मेरो आँखा एकापसमा साक्षात्कार भयो । मैले रुबीनालाई भनें “आइज सँगै बसेर हेरौं उसले लगाउनुहुन्छ भने हामीले हेर्न किन नहुने ।” रुबीना सम्मोहितझैं सरासर म भएठाँउ आई र मलाई एक चड्कन गालामा बजार्दै भनी “लाज लाग्दैन दादा भएर बहिनीलाई यस्तो फिल्म सँगै हेरौं भन्ने ?” मैले गाला मुसार्दै भनें “हेर ! तेरो र मेरो उमेरमा एक बर्षको मात्र फरक छ, अनि हामी पनि जवान छौं । खाली तैले र मैले आफूलाई संयम राख्यौं भने यस्ता जावा फिल्मले के गर्न सक्छ र ?” अनि रुबीनाको कपडा नियालें । आमाले लगाउँदा तारिफ गरेको झैं र्याप ड्रेस रुबीनाले लगाएकी थिई । मैले मौकाको फाईदा उठाउँदै भनें “तैले पनि आमाले झैं र्याप ड्रेस लगाएकी छेस् त अनि आमाले झै ब्रा-पेन्टी पनि नलाएकी त छैनस् नि ?”
त्यहाँ अचानक रुबीनाले माहौल परिवर्तन गर्दै भनि “तपाईलाई खुबै घरमै भएकी आमाले अनि बहिनीले भित्री कपडा लाको छ कि छैन हेर्नुपर्ने, लौ हेर्नुस् तपाईकी बहिनीले के लगाएकी छे ।” अनि एकै सर्कोमा आफ्नो र्याप ड्रेसलाई उघारिदिई । ओहो ! रुबीनाले त अति नै सानो र पारदर्शी ब्रा लगाएकी थिई भने स्ट्रिङ्ग पेन्टी पनि । मैले रुबीनाको तारिफ गर्दै भनें “वाउ! रुबीना तँ त यो ईनरवेयरमा झनै राम्री र सेक्सी देखिन्छेस् त ?” रुबीनाको मुहारमा मुस्कान फैलियो र रुबीनाले ब्राको स्ट्रयापलाई एकछेउबाट समाएर तान्दै निपलसम्म ल्याउँदै भनी “यो लगाएन भने त झन फिल्मको तरुनी झैं देखिन्छु होला नि त ?” त्यसको मसँग जवाफ थिएन । मैले नसोचेको कुरा हुँदै थियो । के गरौं कसो गरौं हुन थालेको थियो । एक मनले सोचें “आमालाई चिक्ने जाँठा छोरालाई बहिनीको जवानी बम्पर अफर परेको पो हो की ?” अर्को मनले सोचें “आमालाई त चिकें चिकें त्यो फरक सन्दर्भ थियो । अब बहिनीलाई पनि चिक्नु र ? कति पाप गर्नु ?” मेरो मनमा कुरा खेल्दै गर्दा रुबीना मेरो छेउमा आएर टाँसिएर बस्दै भनि “के भो दादा ! मेरो जवानी देखेर दिमागले काम गरेन कि क्या हो ?” मेरो मुखबाट बोली फुटेन । रुबीनाले मेरो हात समाएर भनि “आमालाई प्वाँट देख्ने दादालाई मेरो जवानी पचेन कि क्या हो ?” अनि मेरो हातलाई आफ्नो बुब्सको माथी लगेर राखिदिई ।
मेरो हात काँप्न थालेका थिए । रुबीनाले फेरी भनि “दादा! आज आमा त हुनुहुन्न के गरेर मन शान्त पार्नुहुन्छ ?” “के नचाहिने कुरा गर्छे यो ? जे पायो त्यही नबोल है ।” “के नचाहिने कुरा गरेकी छु र दादा ? तपाई र आमाको बारेमा मलाई सबै थाहा नभएको हो र ?” रुबीनाले मेरो हातलाई आफ्नो ब्रा भित्र छिराएर दल्दै भनी “मलाई पनि चखाउनु न जवानीको स्वाद ।” मसँग कुनै बिकल्प थिएन तर पनि म रुबीनालाई जवानीको स्वाद चखाउन तयार थिईन । मैले काँपेको स्वरमा भने “हेर रुबीना ! आमाको र मेरो बिचमा जे भयो त्यो एउटा दुर्घटना जस्तै थियो । त्यसमाथि आमा बुबासँग सन्तुष्ट हुनुहुन्थेन र बुबा झ्याप भएर आएको बेलामा के गरि आमाको र्याप नाईटरोब खुस्क्यो र त्यो घटना घट्यो तर तेरो त सिँगै जवानी छ नि । फेरी कसैले थाहा पायो भने ?”
“तपाई र आमाको बिषयमा मानौं दुर्घटना थियो तर के दुर्घटना सधैं दोहोरिन्छ र ? अनि चार पाँच महिनासम्म मैले थाहा पाएर केही भने त ? यस्तो कुरा थाहा दिएर गर्ने कुरा पनि त होईन नि ? अब आमाले थाहा पाउनुभयो भने तपाईलाई रोक्न सक्नुहुन्न किनकी आमालाई तपाईको खाँचो छ र यतिखेर म आफूमा रोकिन्न ।”
जब रुबीनालाई आमा र मेरो बिचको सबैकुरा थाहा छ भने म त्यहाँ रोकिनुको कुनै अर्थ रहँदैनथ्यो । तैपनि मैले आमाको र मेरो सम्बन्धलाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गरें । जवाफमा रुबीनाले भनि “ह्या दादा ! धेरै नाटक नगर्नु भर्याङ्गमा होस् कि तपाईको कोठामा । किचनमा होस् कि यहीं बैठकमा तपाई र आमाबिचको हरेक दिन मलाई थाहा छ । अझ आजै बिहानको कुरा गर्ने हो भने त आमालाई हप्तादिन पुग्नेगरि तपाईंले मजा दिनुभा’छ । तपाईंहरु पो रमाइलोमा मस्त भएर केहि थाहा पाउनुभएन मलाई त तपाईं र आमाको बिचमा हुने सबै कुराको बेली बिस्तार थाहा छ ।” रुबीनाले मेरो हातलाई आफ्नो बुब्समै छोडेर आफ्नो हातले सामसुम भएर सुतेको मेरो लाँडो समाई र खेलाउन सुरु गरि । मैले भनें “भनेपछी आज मेरो बहिनी दादाको लाँडोको मजा लिने तयारीमा छे होइन त ?” अनि रुबीनाको पोका खेलाउँदै मुखमा मुख जोडेर मैले किस गर्न थालें । रुबिना म म भन्दा माहिर र कामुक निस्किई ।
किस गर्दागर्दै मैले रुबीनालाई सोफाबाट उठाएर ठाडो पारें अनि उसको शरिरबाट र्याप ड्रेसलाई पुरै बाहिर निकालिदिएँ अनि फेरी रुबीनालाई सोफामा बसाउँदै भनें “खै टाङ्ग फारेर बस् तेरो फ्रेस पुती चाटिदिन्छु म ?” रुबीनाले उत्तरमा भनि “छ्या दादा ! फोहोरी भाषा नबोल्नु न ?” “जाँठी ! जति फोहोरी बोल्यो त्यति मजा आउँछ ।” अनि आफैंले उसको टाङ्ग फट्याइदिदै मुख लगेर उसको पेन्टीमाथी किस गर्न थालें । उसको स्ट्रिङ्ग पेन्टीलाई थुकले भिजाएर साईडमा धकेल्दै भनें “तँलाई त म भालुलाई चिकेझैं चिक्छु... तँ पनि याद गर्लिस् नि आफ्नै दाईको लाँडोले कसरी चिक्याथो भनेर ?” जब मैले रुबीनाको चिल्लो पुतीमा थुकिलो जिब्रोले चाटें रुबीनाको मुखबाट “स्वाँ… ऽऽऽऽस्वाँ… ऽऽऽऽ दादा मेरो दादा ऽऽऽऽऽऽऽ कस्तो अर्कै भयो दादा…ऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ स्वाँ…ऽऽऽऽ स्वाँ…ऽऽऽउ ईस्सस् यति मजा हुँदो रैछ... स्वाँ… ऽऽऽऽ स्वाँ…ऽऽऽऽ दादा यस्तो मजा आउँछ भन्ने थाहा पाएको भए त म पहिले नै हजुरको बिस्तरामा मेरो दादा ऽऽऽऽऽऽऽ नाङ्गै सुतिदिन्थे ऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ स्वाँ…ऽऽऽऽ स्वाँ… ऽऽऽउ… ईस्सस…” अनि मेरो टाउकोलाई समाएर पुतीमै गडाउने कोशिस गरि । मैले लपलप गर्दै रुबीनाको पुती चाटिरहें ।
निकैबेर रुबीनाको पुती चाटेपछी मैले रुबीनालाई भने “ओई जाँठी ल अब मेरो लाँडो चुस् ।” अनि उठेर सोफामा बसेकी रुबीनाको ओंठ अगाडी ठन्केको लाँडो तेसारिदिएँ । रुबीनाले भनी मलाई त चुस्न आँउदैन त ।” “जाँठी कोही जन्मिदैं लाँडो चुस्न जान्ने हुन्छ र ऊ त्यहाँ फिल्ममा हेर्दै त्यस्तै गरेर चुस् ।” रुबीनाले अप्ठेरो मान्दै मेरो लाँडो आफ्नो मुखमा लिई र चुस्न थाली । दुई मिनेटको लाँडो चुसाईमा सुरुमा उसलाई अलि नजानेको जस्तो भएपनि पछी उसले राम्रैसँग मेरो लाँडो चुसीरही । निकैबेर रुबीनाले लाँडो चुसेपछी भनि “दादा अब ढिलो नगरिकन छिराउनु न मलाई त कस्तो भईसक्यो ।”
“जाँठी ! दादा पुतीमा लाँडो छिराएर चिक्नुस् भन् अनि बल्ल चिक्छु तेरो पुतीमा ।” अनि रुबीनाले मैले खोजेजस्तै गरि भनि “दादा ! प्लिज चिक्नुन मलाइ पुतीमा हजुरको लाँडो छिराएर... मलाई साह्रै सहन नसक्ने भईसक्यो ।” त्यसपछी मैले रुबीनालाई सोफाबाट भुईमा झारें अनि उसको र्याप ड्रेस छेउबाट टिपेर डल्लो पार्न थालें । रुबीनाले “के गर्न लाग्नुभएको दादा” भनेर सोधी । मैले भनें - “जाँठी ! तेरो मुखमा बुजो लाएन भने त तैले टोलै थर्किने गरि चिच्याउँछेस् नि ? यहाँ तँ र म मात्रै छौं भन्ने सबैलाई थाहा छ । फेरी रंगेहात समाते भने त बर्बाद नै हुन्छ ।”
मैले रुबीनाको मुखमा टम्म हुनेगरी कपडा कोचिदिएँ अनि उसको दुबै हातलाई उसको टाङ्ग समाउन लगाउँदै रेडी पोजिसनमा राखेर हातले लाँडो समाएर रुबीनाको पुतीमा लाँडो हल्कासँग दलिदिन थालेँ । रुबीनाको पुती भित्रको श्रावले गर्दा पुती नै छिपछिपे भइसकेको हुनाले मैले आफ्नो लाँडोलाई उसको पुतीको प्वालमा हल्का छिराएँ । मात्र सुपारीको छेउ पसेको थियो रुबीनाले छिटो छिराउनु न भनेर कर गरेजस्तो गरि । तातो भुङ्ग्रोमा छिराएझैं गरि मैले रुबीनाको पुतीमा लाँडोको सुपारीजस्तो भाग छिराइदिएँ । रुबीनाले लामो सित्कार छोडी र आँखा बन्द गरि । मैले रुबीनाको पोकामा एक हातको मुठ्ठी बनाएँ र निचोर्न थालें अनि रुबीनाको दुवै टाङ्गलाई मेरो काँधमा ल्याई पुर्याएँ र लाँडोलाई हल्कासँग रुबीनाको पुतीमा थोरै भित्र-बाहिर गरें । केहिबेरसम्म त्यसो गरेपछी मैले रुबीनाको पुतीमा लाँडोले ठेल्न थालें । केहि च्यातिएजस्तो गरि मेरो लाँडो प्वाक्क गर्दै रुबीनाको पुतीमा पाँच ईन्चजति भित्र छिर्यो । रुबीनाले तर्सिएर आँखा खोलेर मलाई याचना गर्न थाली । टाउको दायाँ-बायाँ हल्लाउँदै मलाई रोक्न भनि । तर, मैले भनें “जाँठी अघिसम्म त पुती च्यात्नलाई बहुत हतार गर्दैथिईस् त ?” अनि लाँडो अलिकति बाहिर निकालें । रुबीनाको आँखाबाट तर-तर आँसु खसिरहेको थियो । लाँडो बाहिर निकालेको ठानेर हल्का सन्तोषको सास फेर्न लाग्दै थिई । मैले लाँडोलाई फेरी रुबीनाको पुतीमा ठेलें । रुबीनालाई साह्रै गार्हो भएछ क्यार मेरो ढाडमा दुबै हातले बेरी र नङ्ग गाड्न थाली । रुबीनाको यो हरकतले मलाई झनै मजा आएजस्तो भयो । टाइट पुतीमा छिराएकोले होला मेरो लाँडो पनि हल्का दुखेको अनि पोलेको जस्तो हुन थाल्यो । मैले लाँडोलाई अनवरत: रुपमा रुबीनाको पुतीमा भित्र-बाहिर गराउँदै गति बढाउन थालें । सुरुमा त रुबीनाले निकै सकस भएजस्तो गरेकी थिई । पाँच-छ धक्का पुगेपछी भने रुबीनाले मलाई साथ दिन थालेको अनुभव मैले गरें र उसको मुखबाट कपडा बाहिर निकालेर फालिदिएँ । अब भने रुबीनाले “सी... सी..... उह.... आह.... आह...... सी..... सी... अँ... हँ..... हँ.... उह..... अलि छिटो आह... आह.... सी..... अँ.... हँ... गर्नु... गर्नु... उह.... आह.... आह...... सी..... सी... अँ... हँ..... हँ.... उह... अझै... उह.... आह.... आह उह.... आह.... आह उह.... आह.... आह उह.... आह.... आह उह.... आह.... आह मेरो…ऽऽऽऽऽ दादा…ऽऽऽऽऽऽ अरु ऽऽऽऽऽ आहा… ऽऽऽऽऽऽऽ सि… ऽऽऽऽऽऽ सि…ऽऽऽऽऽ अरु कस्सेर…ऽऽऽऽऽऽ आऽऽऽऽऽऽऽऽ आह्ह… !” मैले झनै आफ्नो गति बढाएर रुबीनाको पुतीमा लाँडोको जरैसम्म छिराउने कोशिस गरें र धक्का माथी धक्का दिदैं गएँ । केहिबेरमै रुबीनाले “आह... दादा मलाई त कस्तो कस्तो भयो, आह.... आह उह.... आह.... मेरो पुतीले पिशाब जस्तो के फालेजस्तो छ आहा… ऽऽऽऽऽऽऽ सि… ऽऽऽऽऽऽ सि…ऽऽऽऽऽ“ भनेर मेरो साथ छोडिदिई, मैले रुबीनाको पुतीमा चिक्दै नै थिएँ । मेरो लाँडो पनि टनटनिएर आयो र मैले रुबीनाको पुतीबाट लाँडो निकालें र हातले छोल्न थालें ।
मेरो हातमा च्यापच्याप लागिरहेको थियो । रुबीनाले भनि “दादा ! तपाईको लाँडोमा त रगत लागेजस्तो छ ?” मैले छोल्दै भनें “यो रगत तेरो भर्जिनिटी तोडिएको निशानी हो ?” अनि रुबीनाको छातीमा लाँडो तेर्साएर फुसी झार्न थालें । मेरो लाँडोले आजको दिनमा पनि निकै पिचकारी छोड्यो । फुसीको लर्का रुबीनाको नाइटो हुँदै घाँटिसम्म पुगेको थियो । फुसी पुरै झारेपछी म पनि रुबीनाको साथ छोडेर सोफामा धडङ्ग गर्दै ढल्किएँ । लाँडो सुस्ताएर लत्रङ्ग लत्रिएर तिघ्रामा टाँसियो र हल्का पातलो पदार्थ लाँडोको टुप्पोबाट निस्किइरहेको भान भयो ।
लगभग दश मिनेटपछी रुबीना उठ्ने कोशिस गरि तर सकिन र भनि “दादा ! म त उठ्नै सकिन पुरै जिउ सिथिल भएजस्तो भाको छ, प्लिज उठाउनु न ।” मैले रुबीनालाई हात दिएर उठाँए । निकै गाह्रो गरि रुबीना दुई-चार पाईला हिँडी । म उठेर रुबीनालाई कमरमा बेरें अनि साथ लिएर रुबीनाकै कोठामा लिएर गएँ र भनें “हिंड म तेरो दुखाई मेटाउँछु ।” अनि रुबीनालाई बाथरुममा छिराएर सावर खोलें जब सावरबाट तातो पानी झर्न थाल्यो मैले रुबीनालाई मिचिमिचि नुहाईदिएँ । सबैभन्दा बढी मैले रुबीनाको पुती तातो पानीले पखालिदिएँ । केहिबेरमै रुबीनालाई पनि जोश बढेछ क्यार मलाई आँगालोमा लिएर किस गर्न थाली र मेरो लाँडो लगायत मलाई पनि मिचिमिचि नुहाइदिन थाली । नुहाउँदा नुहाउँदै मेरो लाँडो फेरी ठन्केर आयो । रुबीनाले मेरो लाँडो समाएर मलाई देखाउँदै भनि “दादा ! यो त फेरी उठ्यो त ?” “छेउमा यस्ती राम्री तरुनी बहिनी पुती देखाएर स्वागत गर्दैछे अनि उठ्दैन त ?” अनि मैले रुबीनाको पोका मसल्न थालें । उसको निपललाई दुई औंलाको बिचमा राखेर चलाउन थालें । छिनमै रुबीना उत्तेजनामा आउन थाली । मैले रुबीनालाई बाथरुमबाट बाहिर ल्याए अनि माथी बुबा-आमाको कोठातिर डोहोर्याउँदै भनें “अब बुबा-आमाको बिस्तारामा बुढा-बुढिको खेल खेल्ने हिँड ।” त्यसपछी रुबीनाले मेरो ठन्केको लाँडो समाएर भर्याङ्गतिर डोहोर्याउन थाली ।
भाग्यमानी छोरा - भाग ६ [Coming soon]
भाग्यमानी छोरा : भाग ५ - 'कामुक बहिनी रुबिनासंगको रसलिला' 2017-09-02T15:38:00+05:45 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Miracle Teen Team
Miracle Nepal - Multilingual Sex Story Website: भाग्यमानी छोरा : भाग ५ - 'कामुक बहिनी रुबिनासंगको रसलिला'